हिमालय खबर | एनएसटीमा भोट कस्लाई– मेरो चाहि उहाँलाई
प्रकाशित १० पुष २०७८, शनिबार | 2021-12-25 04:15:39
सन् २०१७ को बडादशैंको अवसरमा नेपाली समाज टेक्सस (एनएसटी) ले अर्भिङ सिटीमा एउटा कार्यक्रम राखेको थियो । कार्यक्रमका लागि नेपालका ख्यातीप्राप्त हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेल उपस्थित थिए ।
अर्भिङ्गमलको झण्डै आठसय जना अटाउने हलमा आयोजना भएको कार्यक्रममा मुस्किलले दुईसय सहभागी थिए । त्यतिखेरनै भनिन्थ्यो–ड्यालसको सेरोफेरोमा झण्डै ४० हजार नेपालीभाषी छन् । नेपालीभाषी भन्दा नेपालबाट आएका नेपाली र पुनर्वास कार्यक्रम अन्तगरत आइओएमले ल्याएका नेपालीभाषी भुटानी समेत भनेर बुझ्नुपर्छ ।
कलाकार गजुरेलले अमेरिकामा रहेका नेपालीकै लागि भनेर तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको क्यारिकेचरको तयारी गरेका थिए । जुन निकै चर्चित पनि थियो । तर ज्यादै न्यून सहभागिता देखेपछि गजुरेलले टिप्पणी गरे–‘ड्यालसमा किन उपस्थिती पातलियो यो रहस्यको विषय भयो । यात मेरो पसल (अभिनय कलाकारिता) चल्न बन्द भएको संकेत हो यो । यात आयोजक नेपाली समाज टेक्ससप्रतिको यहाँका नेपालीहरुको विकर्षण हो यो ।’
मनोज गजुरेलको कार्यक्रम मात्र होइन । सन् २०१८ को बीचतिर नेपाली समाजले नै आयोजना गरेको सिस्नुपानी नेपालको कार्यक्रम त्यस्तै फ्लप कार्यक्रमका रुपमा चिनिन पुग्यो । चोटिला कवि अर्जुन पराजुली, लक्ष्मण गाम्नाङे लगायतको कार्यक्रममा पनि सहभागिता निकै पातलो थियो ।
नेपालबाट आउँदा निकै तयारी र जोश बोकेर आएका मेरा परममित्र गाम्नाङेले छेउमा आएर सोध्नुभयो–‘नेपालीहरु यहाँ धेरै छन् भनेको सुनेको थिएँ ।’ उहाँको आशय ज्यादै पातलो सहभागिता प्रति लक्षित थियो ।
नेपाली समाज टेक्सस स्थापना भएको २३ वर्ष पुरा भयो । २३ वर्ष भनेको वयष्क र परिपक्व उमेर हो । तर जतिजति परिपक्वता आउँदैछ संस्थाले गर्ने कार्यक्रममा सहभागिता र सकृयता त्यतिनै पातलो हुँदै गएको महसुस यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्ने हरकोही गरेका छन् ।
‘कुनै समय मदनकृष्ण र हरिवंश आचार्यको सहभागितामा कार्यक्रम हुँदा मानिसहरु बाहिर ढोकामा बसेर हेरेका थिए । अब उहाँहरु फेरि आउनुहुने भयो भने डेढसयको सहभागिता भयो भने पनि भव्य सफल मान्नुपर्ने अवस्था छ’ समाजकै एक पूर्ब अध्यक्षले गरेको यो टिप्पणीले संस्थाको हविगत प्रष्ट हुन्छ । संस्थाप्रति स्वस्फूर्त लगाव, माया ममता धेरैमा देखिदैन । कार्यक्रम आयोजना हुँदा सहभागितामा देखिनै नैराश्यता, प्रभावविहिन पनि यसको संकेत हो ।
कुनै बेला कलकार भुवन केसीले रित्तो सिडी बेच्दा किन्नका लागि भिडाम्भीड हुने ठाउँ पनि यही ड्यालस थियो । तर अहिले नेपालबाट ख्यातिप्राप्त कलाकार आउँदा समेत लाजमर्दो र निराशाजनक सहभागिता हुन्छ ।
संस्थाको चुनावको समयमा मात्र तातिने मौसमी राप छ । अधिकांश पूर्व पदाधिकारीहरु समेत संस्थाप्रति चासो नराख्नेमा देखिन्छन् । एकजना पूर्ब अध्यक्षले नै आफ्नो सदस्यता नविकरण नगरेको तर कुनै उम्मेदवारको प्रस्तावक बन्न अघि सरेको ताजा घटनानै यो संस्थाको हविगत बुझ्न यथेष्ट छ । जो संस्थामा पुगे तिनले आफूलाई ‘महाराज’ ठान्ने र सदस्यहरु त छाडौं पूर्ब अध्यक्षलाई समेत भुसुना ठान्दै सामाजीक सञ्जालमा अपशव्द प्रयोग गर्ने चलन नयाँ पनि होइन । अगुवा भनिएकाहरुकै दन्तबझान संस्था प्रति विकर्षणको अर्को जिम्मेवार पक्ष हो । एकले अर्कालाई असहयोग र असफल तुल्याउन हुने गरेको भित्री चलखेल पनि संस्थालाई भुत्ते बनाउन मद्धत गर्ने तत्व हुने गरेका छन् ।
यतिखेर फेरि पनि यही एनएसटीको चुनावी सरगर्मी छ । पछिल्लो समयमा टेक्सस अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायका लागि आकर्षण र चर्चाको शिखरमा छ । अमेरिकाका बाँकी ४९ वटै राज्यबाट टेक्सस बसाई सर्नेहरु छन् । रोजगारी होस् या व्यबसायका लागि टेक्सस सरेर यो राज्यको चारै कुनामा नेपालीहरु पुगेका छन् । ओक्लाहोमा नजिक रहेको गेइन्सभील होस् या अर्कान्सससँग जोडिएको टेक्सरकाना होस् । कोलोराडो नजिकै रहेको अमारिलो होस् या न्यूमेक्सिकोसँग जोडिएको मिडल्याण्ड ओडेसा होस् नेपाली नपुगेको कुनै ठाउँ बाँकी छैन । ठूला शहरहरु ह्युस्टन, अस्टिन, सानएन्टेनियो, लबक, वेकोमा पनि ठूलो संख्यामा नेपाली छन् । यद्यपी सबैभन्दा बढी नेपालीभाषी भने ड्यालस फोर्टवर्थ मेट्रोप्लेक्समा बस्दै आएका छन् ।
भोली आइतबार हुने नेपाली समाज टेक्ससको चुनावलाई निकै चासोका साथ यहाँका समुदायले लिएका छन् । यसका दुईवटा कारण छन् । पहिलो, कुन समूहको वर्चश्वमा आउँदो दुई वर्ष टेक्ससको पुरानो संस्था जान्छ । अर्को, नेपालको राजनीतिको वैशाखी टेकेका कुन चाँही वर्ग बलियो रहेछ भनेर मापन गर्ने ।
सन् २०१७ अघि लामो समयसम्म नेपाली समाज टेक्ससमा एउटै समूहको बोलवाला थियो । २०१७ को डिसेम्बरमा जब सुमन थापा अध्यक्षमा छानिए परम्परागत समूह किनारामा पर्यो । त्यही परिणामले हरेक समरयाममा नेपाली बालबालिकाहरुका लागि आयोजना हुँदै आएको समर क्याम्प विभाजित भयो । नेपाली समाज टेक्ससलाई नेपाली सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्र (नेपाली मन्दिर) सँग झण्डै अलग गराइयो । समुदायमा दुईवटा धार बन्यो । एउटा एनएसटी र एनसिएससी अर्थात नेपाली मन्दिर ।
सन् २०१९ मा दिनेश शर्मा नेतृत्वको टीम आएपछि दुई संस्थाबीचको द्वन्द्व अलिकति मत्थर भए जस्तो देखियो । तर यी दुई संस्थामा कसको हैसियत ठूलो भन्ने अन्तरद्वन्द्व भने मेटिएन । नेपाली समाजकै पहलमा नेपाली सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्रको स्थापना भएको हो । चेम्बरको स्थापना पनि नेपाली समाजकै सकृयतामा भएको हो । तर नेतृत्वमा भैरहने उतारचढाव, व्यक्तिगत इगो, वैरभावले गर्दा संस्थाहरुबीच अन्तरद्वन्द्व मौलाइरहेको प्रत्यक्ष महसुस गर्न सकिन्छ ।
नेपालबाट अमेरिका आएका हामी सबै आफ्नो शरिरसँगै उतैको विचार बोकेर आएका छौं । त्यही विचार यहाँ हामीबीच अन्तरद्वन्द्वको मुख्य कारक बनिरहेको छ । त्यसैमा खेल्दै केही समूहहरु पुरानो मुद्धा व्युँताउन र रिसइवी साँध्न सकृय हुँदा द्वन्द्व अझै चर्किन मद्धत पुगेको महसुस यहाँका हरेकले गर्दै आएका छन् ।
नेपाली समाज टेक्ससको नेतृत्वका लागि यतिखेर दुई समूह प्यानलै बनाएर अघि बढेका छन् । भोली लाइन लागेर मतपत्रमै मतदान हुने भएको छ । चुनावी मैदानमा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र वाग्ले र पूर्ब उपाध्यक्ष कमल सापकोटाले नेतृत्व गरेको समूह छ । एकसाता अघिसम्म सापकोटाको ठाउँमा एनआरएनए टेक्ससका पूर्ब अध्यक्ष राजेश अर्याल खडा हुने लगभग निश्चित थियो । तर अर्याल आफू पछि हटेर सापकोटालाई अघि सारे ।
अध्यक्षका दुई प्रत्याशीहरु नेपालको राजनीतिक रुपमा दुई धारको प्रतिनिधित्व गर्छन । सापकोटाको परिवार नेपालमा कांग्रेस राजनीतिमा निकै पुराना हुन् । उनका पिता कृष्णलाल सापकोटा केही वर्ष अघि चितवन कांग्रेसका नेता तथा जिविस सभापति थिए । वाग्ले भने नेपालमा पेशाले प्राध्यापन गर्थे । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु वाग्ले राजनीतिक रुपमा वाम खेमा निकट रहेको र विगतमा प्रवासी मञ्च टेक्सस च्याप्टरमा रहेर काम गरेको बताउँछन् ।
तर दुबै प्यानलमा रहेका उम्मेदवारहरु भने छ्यासमिसे छन् । सापकोटाको टीमबाट महासचिवमा उम्मेदवार भएकी आइसा ओझा प्रवासी नेपाली मञ्चका नेता कमल ओझाकी छोरी हुन् । उता वाग्लेको टीमबट उम्मेदवार भएका सन्देश उप्रेती नेपाली कांग्रेस निकट हुन् । वाग्लेको टीममा अधिकांश उम्मेदवारहरु कांग्रेस निकटस्थहरु छन् ।
विहीबार साँझ बसेको कांग्रेस निकटहरुको संस्था जनसम्पर्क समितिले सापकोटा प्यानललाई आफ्नो आधिकारिक भनेर घोषणा गरिसकेको छ । प्रवासी मञ्चका नेताहरु खुलेरै वाग्ले समूहको प्रचारमा छन् ।
नेपाली समाज टेक्ससको आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धारत दुबै व्यक्तिहरु सामाजीक रुपमा चीर परिचित व्यक्तित्व हुन् । सापकोटा र वाग्ले दुबैले आफ्नो कार्यकालमा खोट रहित रुपमा काम गरेर तत्कालिन अध्यक्षहरुलाई भरपूर सहयोग गरेका छन् । दुबै जनाले नेतृत्वको लागि दावी गर्नुलाई कुनै पनि कोणबाट अस्वभाविक ठान्नुपर्ने अवस्था छँदैछैन ।
सापकोटा सन् २०१५/१७ को तत्कालिन कृष्ण लामिछानेको नेतृत्वको कार्यकालमा संस्थालाई मर्दा र पर्दाको साथी बनाउन निकै खटेका थिए । राजनीतिक रुपमा सुशिक्षित परिवारका जन्मिएका सापकोटाको बोली र व्यबहारमा खोट लगाउने ठाउँ नरहेको उनलाई जान्नेहरु बताउँछन् । सबैसँग समान व्यबहार गर्ने, नम्र बोली, मिठास, मिजासिलो स्वभावले उनी टेक्ससमा सबैसँग परिचित छन् ।
वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र वाग्ले अमेरिका बसाईको छोटो समयमा पनि आफ्नो सकृयताले समाजमा निकै चिनिएका व्यक्ति हुन् । टेक्सस र ओक्लाहोमाको सीमा नजिकको शरमन सिटीमा व्यबसाय गरेर बसेका उनी त्यहाँको टेक्सोमा नेपाली सोसाइटीका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् ।
नेपाली समुदायलाई अमेरिकी मुलधारको राजनीतिमा संलग्नता बढाउन, व्यबसायमा आवद्ध गराउन उनी निकै सकृय छन् । विगत दुई वर्षको अवधिमा उनले नेपाली समाज टेक्ससको वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले संस्थालाई चलायनमान बनाउन निकैनै प्रशंसनीय कामहरु गरेको कार्यसमितिकै सदस्यहरुले बताएका छन् । उनी डेमोक्रेटिक पार्टीमा पनि सकृय छन् ।
दुबैका कमीकमजोरी नभएका होइनन् । दुवै दुधले धोइएका पनि छैनन् । हरेक मानव कोही पनि पूर्ण हुँदैनन् । पूर्ण त भगवान मात्र हुन् । दुबै उम्मेदवार काविल र सक्षम हुनुहुन्छ । सापकोटा नरमपन्थी स्वभावका छन् भने वाग्लेको सांगठनिक कार्यशैली आक्रामक खालको छ । सापकोटालाई राजनीतिक रुपमा बढ्ता आशक्त भनेर टिप्पणी गर्नेहरु छन् भने वाग्लेलाई कडा मिजासको र रुखो भन्नेहरु पनि छन् । तर समुदायलाई परेको बेलामा दुबैले खटेर गरेको सहयोगका कारण यी नकारात्मक पक्षलाई गौण रुपमा लिनुपर्छ भन्नेहरु धेरै छन् ।
अध्यक्षका दुबै प्रतिस्पर्धीहरु समाजका लागि केही गरौं भनेर मरिहत्ते गर्ने व्यक्तिहरु हुन् । दुबैले नेपाली समाज टेक्ससलाई आउँदो दुई वर्षका लागि एजेण्डा दिएका छन् । तर जित्ने एउटैले मात्र हो । नेपाली समाज टेक्ससमा आवद्ध, जो संस्थाका गतिविधिप्रति निरन्तर सकृय छन् दुबैका बारेमा जानकारनै छन् । त्यसोहुँदा व्यक्तिगत रुपमा फलानोलाई नै मत दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा होइन । अमेरिकामा आएर यहाँको सिस्टम बुझेका सबैजना प्रजातान्त्रिक प्रकृया, मूल्य र मान्यताप्रति जानकारनै छन् । कस्ले कति योगदान गरेको छ ? को कति क्षमतावान छ ? र कसको विगतको कृयाशीलता कस्तो थियो भन्ने कुरा यहाँ चर्चा गरिरहन खासै जरुरी छैन । सबैजना आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् ।
चुनावी मैदानमा खडा भैसकेपछि दुई वर्षका लागि जित्नेले संसार जितेजस्तो ठान्नु पनि हुँदैन । नत उपविजेता हुनेले संसारै गुमेजस्तो ठान्न जरुरी नै छ । प्रजातान्त्रिक प्रकृयामा प्रवेश गरिसकेपछि जीत र हारलाई सहज रुपमा स्विकार्न सक्नुपर्छ । हार हुनासाथ विगतमा जसरी नयाँ संस्था खोल्ने चलन थियो आशा छ यसपटक त्यो कार्यले पक्कै निरन्तरता पाउनेछैन । टेक्ससको नेपाली समुदायले गौरव गर्ने प्रोजेक्टका रुपमा अघि बढिरहेको पशुपतिनाथ मन्दिर तथा बौद्ध विहार निर्माण अभियानको कुनै पनि पक्षमा कसैको जीत र हारले असर पनि पर्नुहुँदैन । त्यसतर्फ उम्मेदवारहरु जनि गंभीर हुन जरुरी छ, मन्दिरका पदाधिकारीहरु पनि त्यतिकै जिम्मेवार भएर विवादमा पर्नु उचित हुँदैन ।
मेरो भोट उहाँलाई :
गत साता मन्दिरको हलमा उम्मेदवारी मनोनयन हुँदैगर्दा समाजका केही अगुवाहरुले मलाइ प्रस्ताव गर्नुभयो–‘तपाई पनि यसपटक संस्थामा कुनै न कुनै पदमा आउनुपर्यो ।’
मैले आफू मानसिक रुपमा तयार नरहेको बताएर संस्थाको नेतृत्वमा जान तीनवटा योग्यता हुनुपर्ने मेरो पुरानै मापदण्ड सुनाएँ । अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुका संस्थाको नेतृत्वमा पुग्नका लागि मेरा तीन मापदण्ड छन् । केही मेरा अनुभव, केही साथीहरुको भोगाईबाट यी तीन मापदण्ड पुरा गरेका व्यक्तिमात्र संस्थाको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनुपर्ने मेरो धारणा बनेको छ ।
पहिलो, नेतृत्व गर्न लालायीत व्यक्ति आर्थिक रुपमा सक्षम हुनैपर्छ । किनकी सबै ठाउँमा भावनाले चल्दैन । कुनै पेशा, व्यबसायमा लामो समय बिताइसकेर केही समय त्यो कामबाट अलग बस्दा पनि उसको परिवार चल्न समस्या नहुने व्यक्ति मात्र संस्थाको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनुपर्छ । भन्नुको मतलव संस्थामा लाग्दा पनि नियमित आम्दानी भैरहने व्यक्ति मात्र अघि बढ्नु ठीक हुन्छ । नेपाली समाज टेक्ससको पद नत लाभको पद नै हो, नत तलव आउने पदनै हो । संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै भोलीनै नेपाल जानुपर्यो भने पनि महंगो टीकट रहेछ भनेर चिन्ता गर्ने व्यक्ति संस्थाको नेतृत्व गर्छु भनेर नआउँदानै ठीक ।
दोस्रो, नेतृत्व गर्नेसँग समय पनि हुन जरुरी छ । कामबाट छुट्टी लिन गाह्रो मान्ने, व्यबसायबाट समय निकाल्न नसक्ने व्यक्तिले संस्थालाई समय दिन झनै गाह्रो हुन्छ । तसर्थ समय निकाल्न नसक्ने व्यक्ति पनि नेतृत्वका लागि नतम्सिए हुन्छ ।
तेस्रो, संस्थालाई दिने केही खुबी पनि हुनुपर्छ । संस्थाको इतिहासमा नाम दर्ज गराउने भन्दा पनि ‘मसँग यो भिजन, यो सोच छ । मैले यसरी आफ्नो कार्यकालमा संस्थालाई यो अवस्थामा पुर्याउँछु र सदस्यहरुलाई यो यो सेवा प्रदान गर्छु’ भन्ने दृष्टिकोण, सोच र योजना हुन जरुरी छ । यो नहुँदा अरु मदारी भएर नेतृत्वलाईनै नचाउनेछन् ।
यी तीन क्षमता भएका व्यक्ति जो छन् । नेतृत्वका लागि उहाँहरुलाई मेरो मत जानेछ । यो गुण भएका व्यक्तिहरुलेनै संस्था चलाउने अभिमत पाउँदा परिवर्तनको महसुस गर्न सकिन्छ ।
अन्तिममा, दुबै उम्मेदवार र उहाँहरूको टीमलाइ शूभकामना । जस्ले जितेपनि तपाइहरूको जीत कुनै अमुक वर्ग, व्यक्तिको जीत नभै टेक्ससवासी नेपालीको जीत होस् । पराजित हुनेले पनि सहर्ष स्विकार गर्दै समाजमा निरन्तर सकृयता प्रदर्शन गरिरहनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित ।